Kenya oo Shaaca ka Qaaday in Lamu laga Hirgelinayo Mashruuc Aag Dhaqaale (Economic Zone), islamarkaasna la samaynayo Waddo-tareen oo isku xiriirinaysa Lamu iyo Addis Ababa | MultiethnicSociety
← US warns Ethiopia not to invade Somalia
Qaramada Midoobay oo sheegtay in taageero la siiyo dowladda KMG Somalia ay ku xiran tahay sida ay u hirgeliso heshiiskii Road Map-ka →
Meles Zenawi ayaa Kenya u sheegay in uu diyaariyey kharashkii jidka-tareenka ee isku xiraya Addis Ababa iyo Mooyaale, laakiin Kenya laga doonayo in ay dhamaystiraan Mashruuca dhinacooda wadada-tareenka ee isku xireysa Lamu iyo Mooyaale, sidaas waxaa caddeeyey Raila Odinga.
SomaliaObserver.com | Nov 24, 2011
“Waxaan qorshaynaynaa in aan mashruuc khaas ah keeno xeebta, mashruucaas oo la keenayo Lamu iyo Mombasa” sidaas waxaa yiri Ra’iisul Wasaaraha Kenya, Raila Odinga.
“Itoobiya waa dhamaystireen mashruucaan dhinacooda, waxaana arrintaas ka wada hadalay ra’iisul wasaaraha (Itoobiya) oo ii xaqiijiyey in ay diyaariyeen maal-gelinta waddo-tareen oo isku xiraysa Addis Ababa ilaa Mooyaale, laakiin lacagtas maalgelinta ah ma qoondayn karaan ilaa Kenya ay dhamaystirey qorshaha mashruuca dhinacooda oo isku xiraya Lamu ilaa Mooyaale. Haddii kale waxa uu noqonayaa waddo tareen ah oo aan meelna ku xiriirsanayn Railway to Nowhere.”
Waxana uu intaas raaciyey in “jidkaa tareenku uu tegi doono ilaa iyo Jubba (koonfurta Suudaan) ilaa uu gaaro dalka Kamaruun.” (Video Hoos ka daawo).
Dawladda Kenya ayaa markii dagaaladda sokeeye ka dhaceen Soomaaliya waxay bilowday qorshaha mashruuca Lamu oo markii hore ku bilowday sahamin shidaal oo ay doonayeen in ay ka sameeyaan aag gudaha ugu jira Soomaaliya, waxaana xigey mashruuc baaxad weyn oo Lamu la qorshaynayey in laga sameeyo deked weyn oo ay adeegsadaan Itoobiya iyo Koonfurta Suudaan.
Mashruucaasi si uu u hirgalo waxay Kenya u ku hamidey in ay fidsato xuduudka oo ay badda Soomaaliya qaar ka soo goosato, taas oo ay isku dayday in ay bedesho xadka badda ee aagga Raas Kambooni. Waxayna horaantii 1990-naadkii la xiriirtay qabqable-dagaal oo markaas ka talinayey Kismaayo oo ay ka dalbatey in uu la galo heshiis, laakiin wuuu ku gacan sayray.
Waxaa xigtey 2004 markii xukuumadda FKMG lagu soo dhisay Nairobi/Eldoret in durbadiiba ay saraakiisha Kenya la xiriireen xukuumaddii Cabdullaahi Yuusuf, sida uu SomaliTalk u sheegay masuul xilligaas ka tirsanaa xafiiska Madaxweynaha, waxaana Kenya markaas loo sheegay in aan heshiis ku saabsan badda lala gelayn.
Kenya ma quusan. Markii Jabuuti lagu soo doortay xukuumadda Sheikh Shariif ayaa Kenya oo garaabsanaysa Walad Cabdalla waxay durbadiiba heshiis aan laga fiirsan la galeen DFKMG ee Sheikh Shariif, taas oo lagu doonayey in badda Soomaaliya qayb weyn loo gooyo Kenya si markaas mashaariicda Lamu ugu hirgalaan. Xukuumadda Shariif waxay arrintaas kala kulantay waji gabax weyn markii shacabka Soomaaliyeed ee dhulka leh ay arrintaas ka soo horjeesteen, ilaa markii dambe baarlamaanka DFKMG uu heshiiskaas Isfahamka loogu yeeray ka dhigay Waxba Kama Jiraan.
Markii ay arkeen in qorshahaasi uusan soconayn ayey u soo fekereen nidaam cusub oo ah in la yiraahdo Soomaaliya baddeedu maba cabirna, waxayna xukuumadda KMG ee uu hogaamiyo Sheikh Shariif halkii laga filayey in ay ka taliso danaha shacabkeeda ayey markale u ololaysay qorshaha cusub ee lagu doonayey in lagu duudsiiyo boqolkiiba 97% dhul-badeedka Soomaalida, lana doonayey in la baabi’yo sharcigii badda Soomaaliya ee Law No. 37.
Markale ayaa shacabka Soomaaliyeed arrimahaas gaashaanka u daruureen, kana hor yimaadeen qorshaha ay jaalka ku ahaayeen Sheikh Shariif xukuumaddiisa iyo Kenya oo ahaa in la yiraahdo badda Soomaaliya ma cabirna. Inkasta oo diidmada dambe ee baarlamaanka ay arrimo weyn ku qarsoonaayeen, horena faallooyin looga qoray.
Markii ay Kenya aragtay in xagga sharciga caalamiga ah aan Soomaalida la loodin karayn, ayna shacabka Soomaaliyeed foojigan yihiin (inkasta oo xukuumadda FKMG ay jeebka ugu jirto Kenya), ayaa markaas Kenya dedejisey qorshaheedii saddexaad oo ah hore usoo qorshaynasay oo ah in ay Soomaaliya ku duusho oo ka samayso aag ood-celis ah (Buffer Zone) oo ay toos gacan ugu leedahay si mashruuca Lamu u dhaqan galo.
Kenya waxay Soomaaliya ku duushey 16-kii October 2011, waxayna duqaysay magaalooyin Soomaaliyeed oo ay ku laysay dad shacab ah oo aan waxba galaabsan, qaarkoodna ahaayeen qaxooti.
Kenya iyo Ethiopia waa laba dal oo ay Gumaystayaashii reer Yurub gacant au geliyeen dhul Soomaaliyeed (NFD iyo Soomaali-galbeed), taas oo dhul iyo dad ay kaga weli ku hoos jirey gumaystayaasha Afrika.
VIDEO: Ra’iisul Wasaaraha Kenya oo Arbacadii Nov 23, 2011 shacabkiisa iyo maal-gashadayaasha u caddeeyey in mashruucii Lamu uu dhaqan gelayo. Video hoos ka daawo.